Izindaba - Ukupakisha Ulwazi Lwezinto: Qonda Izici Zephepha, Thuthukisa Ikhwalithi Yokupakisha nokuphrinta
Abstract: Iphepha liyizinto ezisetshenziswa kakhulu ukuphrinta kokufaka. Izici zayo ezibonakalayo zinomthelela oqondile noma ongaqondile kwikhwalithi yokuphrinta. Ukuqonda okulungile nokuqonda ubunjalo bephepha, ngokuya ngezimpawu zomkhiqizo, ukusetshenziswa kwephepha okufanelekile ukwenza ngcono ikhwalithi yemikhiqizo yokuphrinta, kuzodlala indima enhle ekukhuthazeni. Leli phepha elizokwabelana ngezici zokuqukethwe okuhlobene nephepha, ukuze kubhekwe abangane:
Noma yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zephepha eliphrintiwe elinezinto ezithile, ngokuya ngendlela yokuphrinta.
Iphepha elisetshenziselwa ukuphrinta. Ngokuya ngokusetshenziswa kungahlukaniswa: iphepha lokushicilela, izincwadi namaphepha ezincwadi, iphepha lokumboza, iphepha lezokuphepha njalonjalo. Ngokwezindlela ezahlukahlukene zokuphrinta zingahlukaniswa ngephepha lokuphrinta i-letterpress, iphepha lokuphrinta i-gravure, iphepha lokuphrinta le-offset njalonjalo.
Kusho isisindo sephepha endaweni yeyunithi ngayinye, esivezwe ngu-g / ㎡, okungukuthi, isisindo segremu sephepha le-1 square meter. Izinga lephepha elilinganisiwe linquma ukwakheka kwephepha, njengamandla we-tensile, i-tearing degree, ukuqina, ukuqina nokuqina. Lesi futhi isizathu esiyinhloko esenza umshini wokunyathelisa onejubane awulungile ephepheni lobuningi elingezansi kwama-35g / ㎡, ukuze kube lula ukuvela iphepha elingajwayelekile, ukuvalwa ngokweqile akuvumelekile nezinye izizathu. Ngakho-ke, ngokuya ngezici zemishini, ukuhlelwa kokulinganisa kwezingxenye zokuphrinta ezihambelana nokusebenza kwayo kungakhiqizwa, ukuze kuncishiswe kangcono ukusetshenziswa, kuthuthukise ikhwalithi yemikhiqizo nokusebenza kahle kwemishini.
Ingabe ukushuba kwephepha, iyunithi yokukala ivame ukuvezwa nge-μm noma mm. Ubukhulu nobuningi nokuqina kunobuhlobo obuseduze, ngokuvamile, ubukhulu bephepha bukhulu, ubukhulu bayo buhambisana kakhulu, kepha ubudlelwane phakathi kwalaba bobabili abuphelele. Elinye iphepha, yize lincane, lilingana noma lidlula ubukhulu. Lokhu kukhombisa ukuthi ukuqina kwesakhiwo sefayibha kunquma ubukhulu nokushuba kwephepha. Ngokombono wokuphrinta nekhwalithi yokupakisha, ukushuba kwephepha okufanayo kubaluleke kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kuzothinta iphepha lokuvuselela okuzenzakalelayo, ingcindezi yokuphrinta nekhwalithi ye-inki. Uma usebenzisa ukushuba okwehlukene kwezincwadi eziphrintiwe, kuzokwenza ukuthi incwadi eqediwe ikhiqize umehluko omkhulu wobukhulu.
Kusho isisindo sephepha nge-cubic sentimitha ngayinye, esivezwe ku-g / C㎡. Ukuqina kwephepha kubalwa ngobuningi nangobukhulu ngokuya ngefomula elandelayo: D = G / D × 1000, lapho: G imele inani lephepha; D ubukhulu bephepha. Ukuqina kuyisilinganiso sobukhulu besakhiwo sephepha, uma siqine kakhulu, ukuqhekeka kwephepha okukhanyayo, ukukhanya kwe-opacity nokumuncwa kukayinki kuzoncishiswa kakhulu, ukushicilelwa akulula ukoma, futhi kulula ukukhiqiza into enamathelayo engcolile engaphansi. Ngakho-ke, lapho kuprintwa iphepha elinokuqina okuphezulu, kufanele kunakwe ekulawuleni okulingene kwenani lokumbozwa kukayinki, kanye nokukhetha ukoma neyinki ehambisanayo.
Ingabe ukusebenza kokumelana nephepha kokunye ukucindezelwa kwento, kepha nokusebenza kwethayela lezicubu zephepha. Ubulukhuni bephepha buphansi, bungathola uphawu olucacile. Inqubo yokuphrinta ye-letterpress ngokuvamile ifaneleka kakhulu ukuphrinta ngephepha elinobulukhuni obuphansi, ukuze ikhwalithi ye-inki yokuphrinta ilunge, nezinga lokumelana kwepuleti lokuphrinta nalo liphakeme.
Kushiwo izinga lephepha ebusweni bump, iyunithi ngamasekhondi, kuyalinganiswa. Umgomo wokutholwa uthi: ngaphansi komshini othile nengcindezi, ivolumu ethile yomoya ngokusebenzisa ingilazi kanye negebe lesampula lesikhathi phakathi kwesikhathi esithathiwe. Lapho iphepha libushelelezi, umoya uhamba kancane kulo, futhi okuphambene nalokho. Ukuphrinta kudinga iphepha elinobushelelezi obulinganiselayo, ubushelelezi obuphakeme, ichashazi elincane lizokhiqiza ngokwethembeka, kepha ukuphrinta okugcwele kufanele kunake ukuvimba okunamathelayo kwangemuva. Uma ubushelelezi bephepha buphansi, ingcindezi edingekayo yokuphrinta inkulu, ukusetshenziswa kukayinki nakho kukhulu.
6 Iziqu Zothuli
Kushiwo ukungcola okukhona ebusweni bamabala ephepha, umbala nombala wephepha kukhona umehluko osobala. Izinga lothuli liyisilinganiso sokungcola okusephepheni, okuvezwa ngenani lezindawo zothuli ebangeni elithile kumitha eyisikwele lendawo yephepha. Uthuli lwephepha luphezulu, uyinki wokuphrinta, umphumela wokukhiqiza amachashazi umpofu, izindawo ezingcolile zithinta ubuhle bomkhiqizo.
Isilinganiso se-7 Sizing
Imvamisa iphepha lephepha lokubhala, iphepha lokumboza nephepha lokupakisha lakhiwa ngokulinganisa ungqimba oluvikelayo ngokumelana namanzi. Ungayifaka kanjani isayizi, ipeni ledada elisetshenziswa kakhulu lifakwe uyinki ojwayelekile okhethekile emasekhondini ambalwa, dweba umugqa ephepheni, bheka ububanzi obukhulu bokungakhuli, ukungapheleli, iyunithi mm. Ukulinganisa kwephepha phezulu kuphakeme, ukuphrinta kwesendlalelo sikayinki kuphezulu, kusetshenziswa inki kancane.
Kukhono lephepha lokumunca uyinki. Ubushelelezi, ukusika iphepha elihle, ukumuncwa kukayinki kubuthakathaka, ungqimba lukayinki lome kancane, futhi kulula ukunamathela ukuphrinta okungcolile. Ngokuphambene nalokho, ukumuncwa kukayinki kuqinile, ukuphrinta kulula ukoma.
Kushiwo ukuqondiswa kokuhlelwa kwenhlangano yefayibha. Ngenqubo yokwenza iphepha, i-fiber igijima ngokuqondisa okude komshini wephepha. Ingabonakala nge-Angle ebukhali yamamaki wenetha. Kuqondile kuya mpo kuyaphambuka. Inani le-deformation lokuphrinta okusanhlamvu kwamaphepha we-longitudinal lincane. Ngenqubo yokuphrinta okusanhlamvu okuwela ngephepha, ukwehluka kokunwetshwa kukhulu, futhi amandla eqine nezinga lokudabula akubi.
Kubhekiswa ephepheni ekumuncweni komswakama noma ekulahlekelweni umswakama ngemuva kosayizi wokwehluka. Ukuthamba kwezicubu zomcibisholo wephepha, ukwehla kobunzima, kukhuphuka izinga lokukhula kwephepha; Ngakolunye uhlangothi, kwehla isilinganiso sokukala. Ngaphezu kwalokho, bushelelezi, sizing iphepha elihle, isilinganiso salo sokukhula lincane. Njengephepha elenziwe kabili emaceleni, ikhadi lengilazi nephepha le-offset, njll.
Ngokuvamile, lapho iphepha lincipha futhi lincane, kulapho izophefumula kalula. Iyunithi lokukwazi ukuphefumula ngu-ml / min (milliliter ngomzuzu) noma s / 100ml (owesibili / 100ml), okusho inani lomoya odlulile ephepheni ngeminithi eli-1 noma isikhathi esidingekayo ukudlula ku-100ml womoya. Iphepha elinamandla amakhulu omoya lithambekele ekumunweni kabili kwephepha kunqubo yokuphrinta.
Iziqu eziyi-12 ezimhlophe
Kusho ukukhanya kwephepha, uma konke ukukhanya kuvela ephepheni, iso elingaboni liyabona ukuthi kumhlophe. Ukunqunywa kobumhlophe bephepha, imvamisa ubumhlophe be-magnesium oxide bungu-100% njengokujwayelekile, thatha isampula lephepha nge-blue light irradiation, ubumhlophe bokubonisa okuncane kubi. Imitha emhlophe ye-Photoelectric nayo ingasetshenziswa ukukala ubumhlophe. Amayunithi wobumhlophe angamaphesenti ayi-11. Iphepha elimhlophe kakhulu, uyinki wokuphrinta ubonakala umnyama, futhi kulula ukukhiqizwa ngokwenzeka.
13 Ngaphambili nangemuva
Ekwenzeni iphepha, uginindela ulolwelwa ukuhlunga kanye nokoma komzimba ngokunamathela kunsimbi yensimbi. Ngale ndlela, njengohlangothi lwenetha ngenxa yokulahleka kwemicu emihle nokugcwaliswa ngamanzi, ngakho-ke kushiya amamaki enetha, indawo yephepha iyajiya. Olunye uhlangothi olungenayo inetha lungcono. Smooth, ukuze iphepha lenze umehluko phakathi kwezinhlangothi zombili, yize ukukhiqizwa kokomiswa, ukukhanya kwengcindezi, kusenomehluko phakathi kwezinhlangothi zombili. Ukucwebezela kwephepha kuhlukile, okuthinta ngqo ukumuncwa kukayinki nekhwalithi yemikhiqizo yokuphrinta. Uma inqubo ye-letterpress isebenzisa ukuphrinta kwamaphepha ohlangothini olujiyile emuva, ukugqoka kwepuleti kuzokwandiswa kakhulu. Ingaphambili lengcindezi yokuphrinta iphepha lilula, ukusetshenziswa kukayinki kuncane.
Isikhathi Iposi: Jul-07-2021